Mpanamboatra sy mpamatsy hub Usb-C - Orinasa mpamokatra hub China-C China
Bika Aman'endrika Sy Long Di ...
Latency Zero sy Cost-effec ...
▪ Brocade AI 6 in 1 USB Type C Hub dia hub multifunctional dia manitatra ny fifandraisana laptop voafetra.
▪ Izy io dia miaraka amin'ny adapter multifunctional Type-C izay misy ao.
▪ Output Video 4K HDMI: Tohano ny fivoahan'ny horonantsary 4K @ 30Hz na 1080P @ 60Hz. Fitaratra na fanitarana ny efijery kahie amin'ny HDTV, monitor na projector. Ankafizo ny sarimihetsika na ny lalao video eo amin'ny monitor. Asehoy ny PPT amin'ny alàlan'ny tetik'asa amin'ny fivoriana Internet.
▪ Fampitana data haingam-pandeha haingam-pandeha: seranan-tsambo USB3.0 3 mandefa horonan-tsary, mozika ary rakitra hatramin'ny 5Gbps, izay avo 10 heny noho ny USB 2.0. Azonao atao koa ny mamita ny famindrana rakitra ao anatin'ny fotoana fohy.
▪ 100W PD Fast Charging: seranan-tsambo fanaterana herinaratra 100W ahafahanao mameno ny solosainao amin'ny hafainganam-pandeha. Azonao atao ny mampiasa ny Hub rehefa mandoa vola.
▪ 4K HDMI Video Adapter: Mamela anao hitaratra na hanitatra ny efijery findainao amin'ny Max 4K UHD 3840 × 2160 @ 30Hz. Fanamarihana: ny seranan-tsambo USB C amin'ny solosainao dia mila ny fahaizan'ny output video.
▪ SD / TF Card Reader: ny hafainganam-pandehan'ny mpamaky karatra dia 480Mbps. Ny karatra SD & TF dia azo vakiana miaraka. Fahaizana farafaharatsiny hatramin'ny karatra 2TB. Mifanaraka amin'ny karatra fitadidiana 6 hafa: SD Card / SDHC / SDXC / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC.
▪ 5Gbps Data Transmission: seranan-tsambo USB-A 3.0 haingam-pandeha afaka haingam-pandeha 5Gb / s ho an'ny famindrana data haingana, ahafahana mampifandray ireo peripheraly USB marobe toa ny kapila U, Portable SSD, keyboard, mouse, sns.
▪ Brocade AI 7 in 1 USB Type C Hub dia hub multifunctional dia manitatra ny fifandraisana laptop voafetra.
▪ Anisan'izany ny 2 * USB 3.0, 1 * HDMI, 1 * Ethernet (RJ45), ny slot * * Kard TF ary ny slot ho an'ny karatra 1 * SD ary ny fanohanana ny famandrihana PD.
▪ SuperSpeed ​​Data Transfer: Seranan-tsambo USB 3.0 telo no manohana ny tahan'ny fandefasana data hatramin'ny 5Gbps. SD & micro SD cards slots (izay tsy azo ampiasaina miaraka) dia manohana ny taham-pamindrana data hatramin'ny 480Mbps. Ny port Gigabit Ethernet dia manohana ny hafainganan'ny tambajotra 10/100 / 1000Mbps
▪ Fampandrosana haingana PD: Ny seranan-tsambo USB-C dia manohana hatramin'ny 100W Power Delivery mba hitazomana ny MacBook Pro na solosaina finday hafa mifanentana ao anatin'ny 2 ora (mampiasa adapter herinaratra tany am-piandohana) raha mampiasa ny fampiasa rehetra ao amin'ny hub ianao
▪ Fifanarahana fitaovana: mifanentana amin'ny MacBook Air / Pro 13 inch, Dell XPS 15, HP Spectre x360, HP Elite x2 1012, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga, Razer Blade Stealth, Huawei MateBook, ary solosaina finday Type C hafa
▪ Video Ultra HD: Ny seranana HDMI dia mamoaka fanapahan-kevitra hatramin'ny 4K @ 30Hz amin'ny fampisehoana mifandraika
▪ Brocade AI 8 in 1 USB Type C Hub dia hub multifunctional dia manitatra ny fifandraisana laptop voafetra.
▪ Anisan'izany ny 3 * USB 3.0, 1 * HDMI, 1 * 3.5mm audio ， 1 * Kardan'ny TF ary 1 * slot karatra SD ary fanohanana ny famandrihana PD.
▪ [Ataovy Miezaka mafy ny asanao]: ny Type C Hub ampiarahina amin'ny charger tsy misy tariby dia afaka manome fahafaham-po ny filàna rehetra amin'ny famindrana angona, fanitarana fanaraha-maso ary famahanana tsy misy tariby. Seranana 3.0 USB roa sy karatra SD / TF Reader manohana ny tahan'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 5 Gaps.
▪ [Output Lahatsary tsara kalitao]: Fitaratra na fanitarana ny efijeryo amin'ny seranana 4K HDMI an'ny adaptatera USB C ary alefaso ny 4K UHD na horonantsary HD 1080P feno mankany HDTV, monitor na projector. Miomàna hankafy ny lanonana fijerinao sary an-tsarimihetsika toa ny karazana c hub mitondra anao.
▪ [Fifandraisana azo antoka sy azo itokisana]: Noho ny PD3.0, lasa marin-toerana kokoa ny fifandraisana eo amin'ny solosaina finday sy ny USB C Adapter. Tsy manahy intsony momba ny very tahirin-kevitra rehefa esory ny tariby manafatra. Tohano ny fandefasana PD amin'ny max 60W.